တစ်မူထူးဆန်းအောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် ပို့စ်အလန်းစားများ – Trend.com.mm
Posted on November 17, 2017 November 17, 2017 by Wint
ကို ရိုးရိုးတမ်းတမ်း ရိုက်မယ့်အစား ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်း ပြုံးသွားနိုင်
ကင်မရာကိုင်တဲ့သူနဲ့ ပို့စ်ပေးတဲ့လူညီရင် ပုံကောင်းထွက်ပြီပေါ့ …
ပုံလေးတွေ ကြည့်ကြည့်ရအောင် !
ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဓာတ်ပုံရိုက်ချင်
ဒါကတော့ မိသားစုဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့မိသားစုဟာ
ဘယ်လောက် ပျော်ပါး လွတ်လပ်စွာနေတတ်ကြောင်း ဒီလိုဓာတ်ပုံ
ရယ်စရာ ဓာတ်ပုံအိုင်ဒီယာကောင်းရှာနေတာလား? သူငယ်ချင်းတွေ
ကိုခေါ်လိုက်ပါ… သူတို့သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်…
ဒီလိုပုံလေးအတိုင်း စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော …?
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံကိုအသက်ဝင်
တစ်ခါတစ်လေ သင့်အတွက်အမြဲတမ်းလှပနေတဲ့ သဘာဝတရားကြီး
ရှိပါတယ်.. ကြည့်တတ်ရင် ကြည်နူးစရာပါ..